साहस उर्जाको १ अर्ब ५ करोडको आईपीओ निष्काशन हुँदै, शेयर बजार अझै तातिने
गोठालो खबर -३ २०७७ फागुन ९, आइतबार ,०१:२६:PM
काठमाडौँ, ०९ फागुन। नेपाली शेयर बजारमा पुन: अर्को कम्पनीको आई.पी.ओ. निष्कासन हुँदै छ। साहस उर्जाले शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएसंगै चाडैं नेपाली शेयर बजारमा आई.पी.ओ. निष्कासन निष्कासन हुन लागेको हो।
यो संगै अन्य धेरै कम्पनीहरु आई.पी.ओ. निष्कासन निष्कासनको प्रक्रियामा छन् । लगानीकर्ता २५ लाख माथि पुगेको कम्पनीहरुमा आई.पी.ओ. को धेरैलाई चासोको विषय बन्दै आइरहेको छ ।
यसै बीच साहस उर्जाले पनि शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएसंगै कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनिको निष्कासित शेयर मध्य ३५ करोड स्थानीय बासीहरुको लागि छुट्टाइने छ भने र बाँकी ७० करोड सामूहिक लगानी, कर्मचारी र सर्वसाधरणको लागि निष्कासन हुने छ ।
कम्पनीले सोलु खोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना ८६ मेगावाटको निमार्ण कार्य गरिरहेको मा हालसम्म परियोजनको काम ५७ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ ।